Maxaa lagu Xaliyay Xiisadii ka taagnayd Magaalada Gaalkacyo ee sababay dhimashada iyo dhaawaca? – Radio Daljir
Maxaa lagu Xaliyay Xiisadii ka taagnayd Magaalada Gaalkacyo ee sababay dhimashada iyo dhaawaca?
Nofeembar 27, 2017 1:21 g 0
Maamulada Puntland iyo galmudug ee labada dhiinac oo maanta booqasho kutagay suuqii dhawaan uu kadhacay iska horimaad kii sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxa ay sheegeen in ay labada dhinacba ay xaliyeen dagaalkii dhaxmaray malayshiyaadkii ka kala tirsanaa dhinacyada Puntland iyo Galmudug.
Gudoomiye yaasha Maamulada labada dhinaha oo warbaahinta kula hadlay Goobtii uu dagaalku ka dhacay ayaa sheegay in nabada ay kala dhax dhigeen labadn dhinac ay ka soo shaqaynayeen mudo sadax maalmood ah lagana xaajoondoon wixii ka dambeeya dhitii dhacday iyo waxa sababay.
Gudoomiyaha Gobolka mudug ee Puntland Xasan Abgaalow iyo Gudoomiyaha Gobolka Mudug ee dhanka Galmudug Cabdirashiid Xaashi Cartan ayaa siwada jir aha Saxaafada ulahadlay .
Shaqadii Dekadda Boosaaso oo Maanta Hakad kuyimid (dhegayso)
Sheeko Gaaban: Sheekada Ismadhaanto – Taxanaha 38aad